Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka hadlay arrimo ku saabsan doorashada soo socota ee Dalka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka hadlay arrimo ku saabsan doorashada soo socota ee Dalka
By C/raxman maxamed Ibrahim / July 15, 2020 July 15, 2020
Muqdisho (SONNA)- Guddomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanlka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman oo ka hadlay kulanka Golaha ayaa sheegay in dalkuu uu leeyahay sharci oo uu anxisiyay Madaxweynaha, isla markaana aysan ogolaan doonin in la qabto doorasho dadban.
Guddoomiye Maxamed Mursal oo ka hadlayay furitaanka kulankii 16-aad Kalfadhiga 7-aad ee Golaha Shacabka oo ka dhacay xarunta KMG ah ayaa tilmaamay in doorasho dadban ay ka dhalan karto dhibaato dhanka amniga ah, loona baahanyahay in la aado doorasho toos ah.
“Wadankan amni la heli maayo ilaa ay doorasho toos ah ka dhaco, waad dareemi kartaan hadda waqtigii ugu dambeeyay 2016-kii, Odoyaashii ergada iyo Xildhibaanada kala shaqeynayay guddiyada doorashooyinkda inta la wacay ayaa waxaa la yiri dambi baad gashen waana la idinka cafiyay, doorasho dadban hadaad aadno waxa la filan karo dhamaantiin waad dareemi kartaan”.ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Guddoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku uu leeyahay sharci doorasho, ayna muhiimtahay in la raaco habraacyada ku qoran sharciga.
“Xilliga doorashada dadban ee 2016-kii la aadayay wadankan sharci doorasho ma lahayn, Wadanka hadda waxa u leeyahay sharci doorasho oo Baarlamaanku ansixiyay, Madaxweynuhuna saxiisay, meel ay ku qorantahay doorasho dadban in la aadayo ma jirto” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Guddoomiye Maxamed Mursal mar uu ka hadlayay arrimaha doorashada ayuu sheegay in golaha Shacabka uu xaq u leeyahay dhameystirka sharciyada doorashada, isagoo xusay in dowlad goboleedyada aysan xaq u lahayn diyaarinta sharciyo doorasho oo dalka ka dhacda.
“Qodobka aan rabno inan is xasuusinyo, heykal dowladeed ayaa dhisan, Baarlamaanka waa sharci dajin, qodobka 47aad ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhameystirno wixii sharuuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee state-yo iska ma lahan”. Ayuu yiri Guddoomiye Golaha Shacabka.
Guddoomiya Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman aya ugu dambeyn sheegay in shacabka ay xiiso weyn u qabaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku soo doortaan cidda hogaamin lahayd.